नेपाल पठाउने सामाग्रीको तयारी छेन्दुमा गर्दै चीन | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more नेपाल पठाउने सामाग्रीको तयारी छेन्दुमा गर्दै चीन
नेपाल पठाउने सामाग्रीको तयारी छेन्दुमा गर्दै चीन	के–के मागेको थियो नेपालले ? केके आउँदैछ चीनबाट ?
चैत ११ गते, २०७६ - १७:२३
२ लाख पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट (पीपीई), पीसीआर टेस्ट किट एक लाख, भीटीएम एक लाख, एन ९५ मास्क डेढ लाख थान
काठमाडौं । नेपाल सरकारले नेपाललाई कोरोना भाईरसको उपचारका लागी आवश्यक स्वास्थ्य उपकरण सहयोग मागेपछि चीन सरकारले नेपाल पठाउने तयारी थालेको छ ।
चीनीयाँ पक्षले नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराएको जानकारी अनुसार नेपालले माग गरेको सामाग्री चीनको छेन्दुमा संकलन कार्य भईरहेको छ ।
चीनका लागी नेपालका कार्यवहाक राजदुत सुशिल लम्सालले जानकारी गारएअनुसार चीन सामाग्री चाँडो पठाउन तयारी गरिरहेको छ ।
नेपालले आफ्नो देश लकडाउन गरेलगत्तै नेपालका लागी चीनियाँ राजदुत राजदूत होउ यान्छीले ट्विटरमार्फत चिकित्सा सामग्री चाँडै नेपाल ल्याउने बताउदैं ट्वीटरमा लेखेकी थिइन् – ‘हामी नेपालका लागि प्रार्थना गर्छौं र केही चिकित्सा सामाग्री ल्याउन सक्दो संयोजन गर्दैछौं। हामी साथमा छौं,’
स्रोतका अनुसार नेपालले माग गरेका सबै समाग्री उपलब्ध गराउनका लागी चीन सरकार लागिपरिरहेको छ । तर एम्बुलेन्स लगायतका कतिपय सामाग्री ल्याउन सजिलो छैन । चीन तत्काल नेपालमा अतिआवश्यक (पिपिई) लगायतका सामाग्री विमानबाट पठाउने तयारीमा रहेको छ ।
केके मागेको थियो नेपालले ?
नेपालले चीनसँग २ लाख पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट (पीपीई), पीसीआर टेस्ट किट एक लाख, भीटीएम एक लाख, एन ९५ मास्क डेढ लाख थान माग्ने भएको छ। त्यस्तै ल्याबसहितको एम्बुलेन्स १० थान, मोबाइल एम्बुलेन्स ५ थान समेत माग्ने भएको हो।
नेपालले माग्यो चीन र भारतसँग यस्ता सामाग्री (पत्रसहित)
चैत ११ गते, २०७६ - १७:२३ मा प्रकाशित